“Lama hadli doono Pep Guardiola.”. Manuel Pellegrini – Gool FM
“Lama hadli doono Pep Guardiola.”. Manuel Pellegrini
(Manchester) 09 Maajo 2016. Tababare Pep Guardiola ayaa u soo duuli doona xagaagan si uu xilka tababare ee Man City ugala wareego Manuel Pellegrini, laakiin macallinka reer Chile ayaa sheegay inuusan la hadli doonin midka reer Spain isla markaana uusan siin doonin wax xog ah oo ku saabsan kooxda haba yaraatee.
“U maleyn maayo inuu u baahan yahay midaa, waa tababare garanaya waxa ay tahay inuu sameeyo. Wuu garanayaa kubbada Ingiriiska,”. Pellegrini ayaa sidaa yiri.
“Sidoo kale waxaan imid halkan mana jirto cid aan wax kala hadlay.
“Tababarayaasha aadka xirfadlaha u ah, gaar ahaan kuwa muhiimka ah way garanayaa waxa ay tahay inay sameeyaan wayna garanayaan kubbada cagta.”.
Pellegrini oo dhanka kale ka hadlaya Yaya Toure oo uu maalmahaan cadaadis badan saaran yahay isla markaana la hadal hayo inuu kooxda ka tagayo ayaa yiri: “Markasta aysan kooxdu si fiican u ciyaarin waxaa la yiraahdaa Yaya si fiican uma uu ciyaarin.
“Yaya wuxuu yeeshay kulamo aad u muhiim ah kal ciyaareedkan wuxuuna u qalmaa ammaan badan waxa uu kooxda u sameeyay.
“Ciyaaryahanka kaliya ee xilli ciyaareedka soo socda aan heshiis heysan waa Demichelis. Kuwa kale dhammaan heshiisyo ayaa u harsan wayna go’aansan karaan inay ciyaartooy mihiim yihiin iyo inkale.”.